Yangu iPhone Haidi Backup KuICloud! Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Iphone
iphone hapana sevhisi mushure mekudzorera
ios 6 imessage isiri kushanda
iphone inoti haigone kubatana kune chitoro cheapp
My iPhone Haizo Backup Ku iCloud! Heino Chaicho Kugadzirisa.
Mangwanani ega ega, unomuka kuti uone kuti yako iPhone haina kutsigirwa kuICloud mumazuva kana mavhiki, uye iwe hauzive zvekuita. Kana kuti pamwe urikuedza kutsigira yako iPhone nemaoko, asi iwe ramba uchiwana mameseji ekukanganisa. Usati washevedzera 'My iPhone haizoiti backup kuICloud!' pane kati, iwe unofanirwa kuziva kuti iri idambudziko rakajairika pa iPhone uye kugadzirisa kuri nyore. Muchikamu chino, ndichakuratidza sei kugadzirisa dambudziko kana iPhone wako asingadi negadziriro yeparutivi kuna iCloud .
halo yakatenderedza mwedzi zvinoreva izvozvo
Nei Isingaite Yangu iPhone Backup KuICloud?
Pane zvikonzero zvinoverengeka izvo iPhone yako isingakwanise backup kuICloud. Neraki, mazhinji ari nyore kugadzirisa. Kuti iCloud backup ishande, yako iPhone inoda kuve yakabatana neWi-Fi uye panofanirwa kuve nenzvimbo yakakwana yekuchengetera paICloud kuchengetedza backup yako - saka ndipo patichatanga. Ini ndinokuratidza maitiro ekugadzirisa izvo zviviri zvakajairika nyaya zvinokanganisa iCloud backups: hapana Wi-Fi kubatana uye haina kukwana iCloud yekuchengetedza nzvimbo.
Ongorora: Kuti iCloud backups ishande husiku, Zvinhu zvina zvinoda kuitika: Yako iPhone inoda kuve yakabatana neWi-Fi, panofanirwa kuve nenzvimbo inokwana iCloud yekuchengetedza nzvimbo, iyo iPhone inoda kuvharirwa mukati, uye iyo skrini inofanirwa kudzimwa (zvichireva kuti yako iPhone yakarara) .
1. Ita shuwa kuti yako iPhone Yakabatana kune Wi-Fi
iCloud backups chete kushanda pamusoro Wi-Fi kubatana nokuda uwandu date kuti inogona kutsigirwa mune rimwe negadziriro yeparutivi. Kana yako iPhone yanga isina kubatana neWi-Fi, unogona kupisa kuburikidza neako rese data data hurongwa husiku. Kunyangwe iwe uine dhata risingagumi, kazhinji inononoka kupfuura Wi-Fi uye backup inogona kutora mazuva kuti apedze. Heano maitiro ekuita chokwadi kuti yako iPhone yakabatana neWi-Fi:
Tinya Wi-Fi pamusoro pechiso.
Tinya network yeWi-Fi yaungade kubatanidza nayo.
Nyora mu network password kana ukakumbirwa uye tinya iyo Join bhatani kukona yekurudyi-kona yekona.
Iye zvino zvawakabatana neWi-Fi network, edza kuita iCloud backup nekuita zvinotevera:
Tinya pazita rako pamusoro pechiratidziro.
Tinya iCloud negadziriro yeparutivi . Ita shuwa kuti switch iripedyo neICloud Backup yakavhurwa.
2. Ita Chokwadi Une Zvakaringana iCloud Storage
Chimwe chikonzero chako iCloud backups inogona kunge ichikundikana nekuda kwekushaikwa kweinowanikwa iCloud yekuchengetedza. Kuti utarise chako chiripo chekuchengetedza cheICloud, ita zvinotevera:
iphone nyowani isiri kudhaunirodha maapplication
Tinya pazita rako pamusoro pechiratidziro
Pamusoro peiyi menyu, iwe uchaona iyo mamiriro ekuchengetedza kwako iCloud. Sezvauri kuona, yangu iCloud yekuchengetedza izere!
Kugadzirisa yako iCloud yekuchengetedza, tinya pa Manage Kuchengeta . Iwe unogona kana kubaya pane app pazasi kuti uchengete yayo iCloud yekuchengetedza, kana iwe unogona kutenga yakawanda iCloud yekuchengetedza nzvimbo nekutepa Ndiwedzere .
Kamwe iwe kuva nechokwadi iwe zvakakwana iCloud okuchengetera, edza kutsigira iPhone wako zvakare nokutevera matanho ari pamusoro.
Saina Kunze Uye Kudzokera Mune Yako iCloud Akaunti
Imwe inogoneka mhinduro kana yako iPhone isingaite backup kuICloud kusaina kubuda uye kudzokera kuICloud pane yako iPhone. Izvi zvinogona kugadzirisa chero chekuongorora nyaya dzinogona kunge dzichitadzisa iCloud backups kubva kushanda.
Mupumburu pasi uye vawane Maakaunzi & mapasipoti .
Dhura kusvika pasi pekona uye tapira Buda.
Simbisa kuti iwe unoda kudzima marongero ese uye unozosainawa uye woendeswa kune iyo iCloud-yekupinda peji.
Pinda yako iCloud username uye password uye uteedzere pa-screen kukurudzira. Ukangosaina zvakare mukati, edza kutsigira yako iPhone zvakare.
Kusaina Kunze KweI ICloud zvachose Kudzima Iwo Mafaira Pane My iPhone?
Vaverengi vashoma vakabvunza nezve iyo pop-up inoonekwa pane yako iPhone kana iwe uchinge wabuda muICloud. Meseji inotaura kuti unenge uchibvisa (kana kudzima) data kubva kune yako iPhone. Ini ndinonyatsonzwisisa kutya vanhu vazhinji vanonzwa kana vachizviona, asi hapana chekutya nazvo.
Funga nezveICloud senge rekodhi chivakwa chinochengeta makopi emafaira ese pane yako iPhone. Kunyangwe iwe uchiabvisa kubva kune yako iPhone, ako ese mafaera akachengetwa muICloud Drive kuitira kuchengetedzwa kwakachengeteka. Paunosaina zvakare ne iPhone yako, yako yese data inozo dzoreredza kune yako iPhone. Hapana chaungarasikirwe nacho mukuita.
Kana iwe uchiri nenyaya yekutsigira yako iPhone kuICloud, inguva yekumisazve yako iPhone zvigadziro. Maitiro aya haapukute chero zvemukati kubva kufoni yako - chete marongero ehurongwa senge Wi-Fi network mapassword, Zvirongwa zvekuwanika, nezvimwewo, kuseta patsva uku kunogona kudzima chero marongero anokanganisa ma backups ako eICloud.
Mupumburu kusvika pasi Muterere uye vawane Dzorera zvakare .
Sarudza Dzorerazve Zvese Zvirongwa uye simbisa kuti unoda kuenderera mberi. Mushure mekunge yako iPhone yatanga patsva, edza yako iyo nekuita imwe iCloud backup. Kana ikasaita backup, verenga.
5. negadziriro yeparutivi Your iPhone In iTunes Kana Finder
Kana izvo zvakagadziriswa pamusoro zvisina kushanda, ungangoda kudzoreredza chako kifaa. Usati waita izvi, zvakadaro, batanidza yako iPhone kune komputa yako uye woidzosera kumusoro uchishandisa iTunes kana Tsvaga (pane Macs inomhanya macOS Catalina 10.15 kana nyowani). Kuti uite iTunes backup, tevera nhanho idzi:
Unganidza yako iPhone kune komputa yako uchishandisa yakapihwa USB tambo uye vhura iTunes.
Dzvanya bhatani re iPhone kumusoro kweiyo iTunes hwindo.
Tarisa wakatarisana nepakati pechidzitiro pasi peBackupsheading. Dzvanya bhatani rakanyorwa Izvi
kombiyuta pasi peiyo Yekutsigira kumusoro kumusoro. Wobva wadzvanya iyo Dzokera Kumusoro Izvozvi bhatani kurudyi-ruoko rekona kuti negadziriro yeparutivi iPhone wako iTunes.
Kuti uchengetedze iPhone yako uchishandisa Finder, ibatanidze kune tambo yeMheni. Wobva wadzvanya pane yako iPhone pasi Nzvimbo .
maitiro ekuvhara maapple paapuro wachi
Mu Backups chikamu, tinya denderedzwa padyo ne Dzorera rese data pane yako iPhone kune iyi Mac . Pakupedzisira, tinya Dzokera Kumusoro Izvozvi .
6. DFU Dzosera iPhone Yako
Mushure mekuchengetedza kwako kwapera, tevedzera Tutorial yedu sei DFU kudzorera iPhone wako. Kudzoreredzwa kweDFU kwakasiyana neyechinyakare iPhone kudzoreredza sezvo ichidzima zvese zvako iPhone's software uye zvigadzirwa zvehardware, kujekesa yako iPhone yechero zvingangodaro nyaya uye zviputi. Mhando iyi yekudzoreredza inowanzoonekwa seyekupedzisira-ese-kuve-ese mhinduro yeiyo iOS software glitches.
iPhone Kutsigira Kumusoro KuI ICloud zvakare
Uye ipapo unayo: Dhata rako rakachengeteka nekuti iwe iPhone iri kutsigira kumusoro kuICloud zvakare. Ita shuwa yekugovana ichi chinyorwa pasocial media kudzidzisa shamwari dzako uye mhuri zvekuita kana yavo iPhone isingaite backup kuICloud. Kana iwe uine chero imwe nyaya yeICloud, tiudzei muchikamu chemashoko pazasi!